देउवा सभापति बनेपछि आर्थिक रूपमा पनि खस्कियो कांग्रेस, ४ वर्षदेखि निरन्तर घाटामा
काठमाडौं – लामो समय सत्ताको नेतृत्व गरेर अहिले प्रतिपक्षमा पुगेको नेपाली कांग्रेस घाटामा गएको छ ।
तत्कालीन कार्यवाहक सभापति रामचन्द्र पौडेलले १३ औं महाधिवेशनबाट देउवालाई पार्टी नेतृत्व सुम्पिँदा आर्थिक वर्ष २०७१/७२ सम्म नेपाली कांग्रेस ६ करोड बढी बचतमा थियो तर देउवा सभापति भएपछि पार्टीको आर्थिक अवस्था खस्किँदै गएको छ ।
देउवा सभापति भएर कार्यकाल सकिनैलाग्दा कांग्रेस पार्टी हाल करीब २ करोड घाटामा डुबेको छ । देउवाको नेतृत्वमा कांग्रेसले निर्वाचन त जितेन नै, उल्टै पार्टी निरन्तर घाटामा डुबेको छ ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पराजित भएपछि प्रतिपक्षमा बस्ने अवस्थामा पुगेको कांग्रेस लगातार ४ वर्षदेखि घाटामा डुबेको छ । २०७२ फागुनमा सम्पन्न तेह्रौं महाधिवेशनमा शेरबहादुर देउवा सभापति बनेका थिए । देउवा सभापति हुनुअघि २०७२ सालको लेखापरीक्षणले कांग्रेस ६ करोडभन्दा बढी बचतमा रहेको देखाएको थियो ।
महाधिवेशन र त्यसपछिका तीनै तहका चुनावमा करोडौं खर्च भएपछि कांग्रेस हालसम्म घाटाबाट उम्किन सकेको छैन । पछिल्लो लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ असारसम्म कांग्रेसको घाटा १ करोड ९४ लाख ३७ हजार २ सय १६ रहेको छ ।
सभापति देउवाले न चुनाव जिताए, उल्टै घाटामा पुर्‍याए !
आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा कांग्रेसले ८ करोड ११ लाख आम्दानी गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले देखाएको छ । सोही आर्थिक वर्षमा कांग्रेसको कूल खर्च भने जम्मा १ करोड ४७ लाख थियो भने बचत ६ करोड ६४ लाख १८ हजार ७ सय ४९ थियो । २०७० सालको दोस्रो संविधान सभाको चुनावपछि देशभरिमा पहिलो पार्टी बनेको कांग्रेसले २०७० सालको फागुनमा स्व. सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्‍यो ।
संविधान जारी भएपछि २०७२ असोज २५ गते तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि कांग्रेस सत्ताविमुख बन्यो र प्रतिपक्षीको बेञ्च सम्हाल्यो । यही अवधिमा ६ करोडभन्दा धेरै बचत गर्न सफल कांग्रेसले २०७२ सालको फागुनमा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व पायो । देउवा आएपछि कांग्रेस निरन्तर घाटामा छ । प्रतिवेदनले कांग्रेस महाधिवेशनमा मात्र ४ करोड ३२ लाख खर्च गरेको उल्लेख गरेको छ भने भूकम्प पीडितलाई राहत वितरण गर्न १ करोड ८१ लाख खर्च गरेको देखाएको छ । त्यसपछि कुनै बेला ६ करोड बचत रहेको कांग्रेस अढाई करोड घाटामा फस्यो ।
जिताउन नसकेको त्यो चुनावको घाटा
२०७४ सालको वैशाखबाट शुरू भएको स्थानीय तहको चुनाव ३ चरणमा सम्पन्न भएको थियो भने प्रादेशिक र संघीय संसदको निर्वाचन २ चरणमा सम्पन्न भएको थियो । लेखापरीक्षण प्रतिवेदनका अनुसार चुनाव खर्चका रूपमा कांग्रेसले जम्माजम्मी ६ करोड ७६ लाख खर्च गरेको छ ।
निर्वाचनमा भएको दलगत खर्चको विवरण हामीले निर्वाचन आयोगबाट पनि लिन खोजेका थियौं । निर्वाचन आयोगका उपन्यायाधिवक्ता तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन शाखा प्रमुख रुद्रप्रसाद सुवेदीले निर्वाचन आयोगमा रहेको दलगत खर्चको विवरण अहिले उपलब्ध नभएको जानकारी दिए ।
‘सत्तामा पुगेपछि पार्टीलाई बिर्सने रोग कांग्रेसको पुरानो हो, नेता मोटाउने र पार्टी दुब्लाउने काम भइरहेको छ,’ एक पूर्व केन्द्रीय सदस्यले लोकान्तरसँग भने ।
चल्नै नसक्ने गरी घाटामा छैनौं : मुख्यसचिव पौडेल
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्ण पौडेलले कांग्रेससँग जगेडा कोष रहेकाले घाटामा डुबेको भन्न नमिल्ने तर्क गरे । ‘लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले कांग्रेस घाटामा रहेको देखाएपनि कांग्रेससँग जगेडा कोष छ, हामी चल्नै नसक्ने गरेर घाटामा डुबेका छैनौं,’ पौडेलले भने, ‘कांग्रेस पारदर्शी पार्टी भएकाले आर्थिक रूपमा कमजोर छैन ।’
हरेक दिनको प्रशासनिक खर्च आफैंले अद्यावधिक गर्ने पौडेलले बताए । ‘दैनिक खर्चमा कहीँकतै अपारदर्शिता भेटिएमा त्यो स्वीकृत हुँदैन,’ पौडेलले लोकान्तरसँग भने, ‘पार्टीको कार्यतालिका अनुसार हामीले प्रत्येक महिनाको अनुमानित खर्च निकाल्छौं र त्यही अनुसारको ‘पेट्टी क्याश’को व्यवस्था गर्छौं । चन्दादाताहरूले दिएको रकम पनि हाम्रोमा उत्तिकै पारदर्शी छ ।’